Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » 60% ny Amerikanina milaza fa hijanona ny sarontava
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny Repoblikana indrindra no nitarika ny fiampangana an'ireo mandat mask, na dia hita aza fa nanohana ny saron-tava amin'ny lafiny roa amin'ny làlan-kizorana, ary ny antsasaky ny Repoblikana dia nilaza fa hisaron-tava izy ireo raha marary, raha 80 % ny Demokraty no nilaza izany.
67% ny Amerikanina mikasa ny hampiasa sarontava ampahibemaso raha mahatsapa marary.
Amerikanina maro no maniry ny hiantehitra amin'ny saron-tava, na dia amin'ny tontolo aorian'ny aretina aza.
Amerikanina maherin'ny 40% no milaza fa hisaron-tava amin'ny "toerana be olona" na dia aorian'ny areti-mandringana aza.
Araka ny fanadihadiana vaovao nataon'ny Sekolin'ny Politika sy ny Governemanta Schar ao amin'ny George University, Amerikanina maro no maniry ny hiantehitra amin'ny saron-tava, na dia amin'ny tontolo aorian'ny aretina aza.
Mandritra ny fotoana fanavaozana ny baiko sy ny torolàlana nohavaozina avy amin'ny Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) nahazo tosika mavesatra avy amin'ny mpitsikera, hitan'ny fitsapan-kevitra vaovao fa ny roa ampahatelon'ny Amerikanina dia hanohy hisaron-tava raha mahatsapa marary izy ireo, aorian'ny areti-mifindra coronavirus, ary maherin'ny 40% no hisaron-tava amin'ny 'toerana be olona' na dia aorian'ny COVID-19 aza.
Araka ny fanadihadiana natao, omaly, dia 67% amin'ireo Amerikanina no mikasa ny hampiasa sarontava ampahibemaso raha mahatsapa izy ireo fa marary. Tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana tamin'ny lohataona tamin'ny taon-dasa, ny torolàlana voalohany an'ny CDC momba ny sarontava dia tsy mitafy afa-tsy raha mahatsapa fambara coronavirus ianao. Nesorin'izy ireo ny torolàlana momba ny saron-tava ho an'ny Amerikanina vita vaksiny, ary nohavaozin'izy ireo avy eo fa ny torolàlana milaza fa takiana ny saron-tava, na dia ho an'ireo vita vaksiny aza, any amin'ny toerana heverin'izy ireo ho faritra be risika.
Maherin'ny 30% ny valinteny dia nilaza fa hisaron-tava izy ireo raha marary rehefa vaky ny areti-mandringana ny firenena. Maherin'ny 50% koa no nilaza fa tsy hisaron-tava amin'ny faritra be olona izy ireo, zavatra naroson'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana indraindray, indrindra ho an'ny toerana anaty trano, noho ny fitomboan'ny tranga manerana ny firenena sy ny fiparitahan'ny karazana delta.
Maherin'ny 40% anefa dia milaza fa hisaron-tava amin'ny "toerana be olona" izy ireo na dia aorian'ny areti-mandringana aza.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny sehatry ny politika dia nampiseho bebe kokoa tamin'ny fametrahana fanontaniana raha toa ka "niverina normal" ny fiainan'ny mpamaly, miaraka amina fanjakana sy toerana marobe mihemotra ny fameperana sy ny fisokafan'ny asa indray.
Ny 15% amin'ireo Demokraty milaza tena irery ihany no nilaza fa "niverina tanteraka tamin'ny laoniny" ny fiainany, raha 48% amin'ny Repoblikana. Maherin'ny 40% -n'ny Demokraty no mino ny fiainany handroso tanteraka amin'ny areti-mandringana amin'ny taona manaraka, raha 20% kosa mino telo volana fotsiny no ilaina. Ny Repoblikana dia azo inoana kokoa, raha ny fanadihadiana natao, fa nanatrika fivoriana tao an-trano feno olona tamin'ny taona vaovao noho ny Demokraty, maro amin'izy ireo no matahotra ny fihenan'ny tahan'ny vaksiny sy ny karazany.
Natao ho an'ny olon-dehibe 1,000 ny fandatsaham-bato ary manana hadin'ny fahadisoana miampy 4 na XNUMX%.
Ny mpiasan'ny fahasalamana dia nandany ny herinandro lasa teo amin'ny fampiroboroboana ny vaksiny sy ny fampitandremana momba ny fitomboan'ny tranga coronavirus amin'ny fararano. Anthony Fauci, lehiben'ny mpanolotsaina an'ny filoha Joe Biden, dia nampitandrina tamin'ity herinandro ity fotsiny fa mino izy fa mety hahatratra 200,000 isan'andro ny trangana virus coronavirus.
Etazonia dia manana salan'isa hafindra hafitoana manodidina ny 90,000 tranga vaovao amin'ity herinandro ity, araka ny angon-drakitra Johns Hopkins University, izay mihoatra ny 30% noho ny salan'isa fito andro teo aloha.